WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ဘ‌‌လော့ခ် » တစ်ဦးက WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု Make ရန်ကဘယ်လို
တစ်ဦးက WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု APK ကို Make ရန်ကဘယ်လို
WhatsApp ကိုတစ်ချိန်ချိန်မှာပြန်င်း၏ဗီဒီယိုကိုခေါ်ဆိုခြင်းအင်္ဂါရပ်စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ မကြာမီကနဦးပစ်လွှတ်ပြီးနောက်, အင်္ဂါရပ်ကို iPhone, Android နဲ့ Windows အသုံးပြုသူများအတွက်ရရှိနိုင်ခဲ့။ သင်သည်ဤအင်္ဂါရပ်အသုံးပြုချင်လျှင်, သင်ပထမဦးဆုံးအသငျသညျ video call တစ်ခုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ရှေ့၌သင်တို့ WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာကို update လုပ်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ အမှု၌သင်တို့ကိုအလိုအလျှောက်မွမ်းမံမှုများမခံမယူဖို့ setting များကိုစီမံခန့်ခွဲကြပါပြီ, သင်အမြဲ Store မှာဒါမှမဟုတ် Apple က App Store ကို Play နှင့်မွမ်းမံမှုများစစ်ဆေးသည်ကို Google ကိုသွားနှင့်ပေးရမည်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သငျသညျမတတျနိုငျများမှာလျှင်ဗီဒီယိုအင်္ဂါရပ်တောင်းဆို, ဒါမှမဟုတ် app ကိုဖွင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားအင်္ဂါရပ်စနစ်တကျအလုပ်လုပ်သည်မဟုတ်, ဒါမှမဟုတ်မှားယွင်းမှုတစ်ခုပေါ်လာလျှင်, သင် WhatsApp ကို beta ကိုဗားရှင်း APK ကိုဒေါင်းလုတ်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါ။ ဤသည်သို့မဟုတ်အမှုအရာညာဘက်ကိုမထားစခွေငျးငှါဖြစ်နိုင်သည်။ ကျနော်တို့သင်သည်သင်၏စမတ်ဖုန်းအပေါ် WhatsApp ကို၏ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုအင်္ဂါရပ်ကိုသုံးနိုင်သည်ကိုဘယ်လိုအသေးစိတ်ဆွေးနွေးပေးသွားပါမယ်။
တစ်ဦး WhatsApp ကိုဗီဒီယိုကဖုန်းခေါ်ရန်ကဘယ်လို
အဆိုပါ WhatsApp ကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားအင်္ဂါရပ်ပစ်လွှတ်ပြီးနောက်သို့မဟုတ်ကြောင့် beta ကိုဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ရန်ဖြစ်စေသင်ရရှိနိုင်ပါကအဆင်သင့်မရနှင့်သင့်ပထမဦးဆုံးသောဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရန်အချိန်ဖြစ်ပါသည်။ အခြား WhatsApp ကိုအသုံးပြုသူတစ်ဦးကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ရန်အလို့ငှာအောက်ကအသေးစိတ်ခြေလှမ်းများကိုလိုက်နာပါ။
သင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင် WhatsApp ကိုလျှောက်လွှာကိုဖွင့်။
ကို 'ဆက်သွယ်ရန်' 'tab ကိုသွားပါ။
သင်တစ်ဦး WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုလုပ်ချင်ဘယ်သူကိုအတူအဆက်အသွယ်ရှာပါ။ သင်ကစာရင်းဆင်း scroll နှင့်လူတစ်ဦးကိုရှာဖွေသို့မဟုတ်ရှာဖွေရေးအင်္ဂါရပ်များအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ။
မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာတည်ရှိပါတယ်ဖုန်း icon ပေါ်တွင်ထိပုတ်ပါ။
့ dropdown ကနေ 'သည်ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို' 'အပေါ်ထိပုတ်ပါ။
ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုစတင်ပါလိမ့်မည်။ အမြဲအဖြစ်, သင်ဖို့ရှေးခယျြဖြစ်စေသင့် screen ပိုကြီးသို့မဟုတ်ဆန့်ကျင်ဘက်လူတစ်ဦး၏စေနိုင်သည်။
အဆိုပါ WhatsApp ကိုဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားများအတွက်စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ဖို့သတိပြုပါသလား, နှစ်ဦးစလုံးသည်အသုံးပြုသူများဒီ feature ကိုထောက်ပံ့သော application ကိုတည်ဆောက်ကြသင့်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ခေါ်ဆိုမှုကိုကိုကျော်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်သင်တစ်ဦးတုံ့ပြန်ချက် prompt ကိုလက်ခံရရှိပေလိမ့်မည်။ သင်ပေးချင်မည်မျှကြယ်များရွေးချယ်နိုင်သည်။ ယင်းအဆင့်သတ်မှတ်ချက်နိမ့်သည်မှန်လျှင်, သင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့ပြဿနာများကို tick ဖို့တောင်းခံရပေလိမ့်မည်။
သင်ပြုသင့်ပါတယ်ပထမဦးဆုံးအရာတစျခုကဆာဗာဝန်စီမံခန့်ခွဲကြောင်းသေချာစေသည်ကတည်းက WhatsApp ကိုဗီဒီယိုကတောင်းဆိုအင်္ဂါရပ်သင့်ရဲ့ device ကိုအပေါ်ရှုမြင်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်ဖြစ်ပါသည်။ သငျသညျအလျင်ဖြစ်ကြပြီးစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုကြပါလျှင်သို့သျောလညျး, အောက်ပါအဆင့်တွေကိုသင်ချက်ချင်းအင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုဗီဒီယို get ကူညီပေးပါမည်။
ဒေတာများကိုထိုအ WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ
ကုမ္ပဏီအတွက်၎င်း၏ပလက်ဖောင်းကို အသုံးပြု. အပေါ်မည်သည့်စွဲချက်ကောက်ခံပါဘူးအဖြစ် WhatsApp ကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှု, လုံးဝအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သငျသညျ video call တစ်ခုလုပ်ဖို့လိုလျှင်မည်သို့ပင်ဆို, သင်ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်ကောင်းသောအင်တာနက်ချိတ်ဆက်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ အင်တာနက်မြန်နှုန်းပိုကောင်း, ပိုမြင့်အရည်အသွေးသင်သည်သင်၏မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုနှင့်အတူတဲ့အခါသင်ကဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ, တူညီတဲ့များအတွက်အားနည်းချက်လည်းရှိပါတယ်။ သငျသညျ video call တစ်ခုစတင်ရန်အခါသင်က Wi-Fi ကိုမဟုတျပါလျှင်, သင်လျင်မြန်စွာသင့်ရဲ့ဒေတာကိုမှတဆင့် run ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျအသုံးပြုတဲ့ဒေတာကိုလျှော့ချဖို့လိုပါလျှင်, သင်ကုမ္ပဏီမကြာသေးမီကတူများအတွက် option ကိုအတူတက်လာသည်ဟုသိရန်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မည်။ သငျသညျ WhatsApp ကို၏ setting menu ကို၌ဤမြင်လိမ့်မည်။
WhatsApp ကို 2G, 3G နှင့် 4G အပေါ်အလုပ်လုပ်တယ်နေစဉ်, အရည်အသွေး 3G နှင့် 4G နှင့်အတူ unarguably ပိုကောင်းဖြစ်လာပါဘူး။ သငျသညျ video call တစ်ခုလုပ်ပေးအခါတိုင်း, WhatsApp ကိုတိကျတဲ့အင်တာနက်မြန်နှုန်းကပ်မထားဘူး။ အဲဒီအစားသူကအမြန်နှုန်းမှအညီဗီဒီယို၏အရည်အသွေးညှိ။ ဤသည်ဗီဒီယို၏အရည်အသွေးတစ်ခုသိသာထင်ရှားစွာပြောင်းလဲမှုကိုမှန်ကန်စေသည်။ တကယ်တော့, WhatsApp ကိုဈေးကွက်ထဲမှာရရှိနိုင်အများဆုံးကိုအခြားရွေးချယ်စရာထက် သာ. ကောင်း၏။ ပင် 2G မြန်နှုန်းနှင့်အတူအရည်အသွေးအလုံအလောက်ချောမွေ့ဖြစ်ပါတယ်။
သင် WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများဖြင့်သလားနိုင်သလားကိုသိသည်မဟုတ်သောအရာတို့ကို
WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်အတူ, သငျသညျအမှုအရာတွေအများကြီးလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်အထက်တွင်မြင်သည်အတိုင်း, ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအားမရရိုးရှင်းတဲ့အလုံအလောက်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျ video call တစ်ခုလက်ခံရရှိလျှင်သင်လုပ်ဖို့လိုအပ်သမျှသင်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုငြင်းပယ်ချင်လျှင်လက်ခံရရှိဒါမှမဟုတ်အနီရောင်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပွတ်ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်အပြာရောင်ခလုတ်ကိုဖွင့်ပွတ်ဆွဲရန်ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာအစက default အားဖြင့်ဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုသင့်ရဲ့စမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်ရှေ့-Face ကင်မရာကိုစတင်သုံးစွဲလိမ့်မည်ဟုသိရန်ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆဖြစ်နိုင်သည်။ သငျသညျကျောကင်မရာကငျြတယျဆိုရငျပဲမျက်နှာပြင်ကိုထိပုတ်ပါကချက်ချင်းအမြင်လှန်ပါလိမ့်မယ်။ အခြားလူတစ်ဦးသင်တို့ကိုတွေ့မြင်သော်လည်းမငျသညျနားထောငျနိုငျရနျမယ်လို့ထိုကဲ့သို့သောမိုက်ခရိုဖုန်းအသံပိတ်တစ်ခု option ကိုလည်းရှိပါသည်။
Group မှ WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများ
သငျသညျသငျနှငျ့အတူအုပ်စုတစ်စုကဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနိုင်သည်ကိုသင်သိပါသလား WhatsApp ကို? သငျသညျအုပ်စုခေါ်ဆိုခ၌ရှိသကဲ့သို့အများအပြားလေးအဖြစ်လူတွေရှိနိုင်ပါသည်။ အုပ်စုတစ်စုယေဘုယျအားဖြင့်ပုံမှန်အတိုင်းဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပိုဒေတာလောင်ခေါ်ဆိုကြောင်းမှတ်သားပါနဲ့။ အုပ်စုတစုခေါ်ဆိုခအောင်ရန်လမ်းညွှန်ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြအပ်ပါသည်။
အုပ်စုတစုခေါ်ဆိုခကိုစတင်ရန်, ပထမ, ပထမဦးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးမှတစ်ဦးကိုဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပါစေ။ ပြီးတာနဲ့ပြုမျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိထိပ်လက်ျာဘက်၌တည်ရှိသည် "ပါဝင်သူ Add" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
သငျသညျတဖနျသင့်ရဲ့အဆက်အသွယ်စာရင်းကိုမြင်လိမ့်မည်။ သငျသညျအုပ်စုခေါ်ဆိုခမှ add ချင်ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုရွေးချယ်ပါ
တစ်ဦး WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအပေါ် multitasking
WhatsApp ကို video call တစ်ခုအပေါ်နေစဉ်ယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်အခြား application သုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒီ feature အများဆုံးဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုကို apps များကဤပူဇော်ကြဘူးသင်တို့ရှိသမျှအချိန်တိုင်း app ကိုပေါ်နေဖို့ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေနေကြသည်ကတည်းကမီးမောင်းထိုးပြခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
-တာဝန် Multi နိုင်တော့မည်ဖို့, "ကို Message" ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။ သင်မက်ဆေ့ခ်ျများစစ်ဆေးသည်နှင့်သူတို့ကို reply နိုင်မည့်သင့်ရဲ့ WhatsApp ကိုချက်တင်စာမကျြနှာကိုပြန်ယူပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကျောဗွီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုရချင်တယ်ဆိုရင်, ရိုးရိုးထိပ်မှာအစိမ်းရောင်ဘားတန်းပေါ်ထိပုတ်ပါ။
WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအောင်လုပ်နည်း WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှု WhatsApp ကိုဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုအန်းဒရွိုက်